ဝါရှင်တန်မြို့တော် လွှတ်တော် နဲ့ အစိုးရရုံးများ လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲ ရာထူးမှ နုတ်ထွက်မည်
Capitol Police- ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲ Steven A. Sound (Supplied: United States Capitol Police)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ၀ါရှင်တန် ဒီစီမြို့တော်မှာရှိတဲ့ လွှတ်တော်အဆောက်အဦးတွေနဲ့ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် စာကြည့်တိုက် အပါအ၀င် နိုင်ငံတ၀ှမ်းမှာရှိတဲ့ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူရတဲ့ (United States Capitol Police) ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲ Steven A. Sound ဟာ ဇန်န၀ါရီလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ရာထူးကနေ နှုတ်ထွက်မယ့်အကြောင်း အမေရိကန် သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ကြာသပတေးနေ့က ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဇန်န၀ါရီလ ၆ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က လွှတ်တော်အဆောက်အဦးကို သမ္မတ Donald Trump ကို ထောက်ခံသူတွေက ၀င်ရောက် စီးနင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ လွှတ်တော်အတွက် လုံခြုံရေးတာဝန်ယူရတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့အပေါ် အပြစ်တင် ပြောဆိုမှုတွေ ထွက်ပေါ်လာပြီး မကြာခင်မှာဘဲ သူ့အနေနဲ့ ရာထူးက မကြာခင်မှာ နုတ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာတာပါ။
ရွေးကောက်ခံသမ္မတ Joe Biden ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုဖို့ ရက်အနည်းငယ်အလိုမှာ လွှတ်တော် အဆောက်အဦးတွေနဲ့ အစိုးရရုံးတွေရဲ့လုံခြုံရေး တာဝန်ယူရတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီး ရာထူးက နုတ်ထွက်မှာဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရက ကြာသပတေးနေ့မှာ ပြောပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ လွှတ်တော်လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ လုံခြုံရေးအားနည်းချက်တွေအပေါ် နိုင်ငံတ၀ှမ်း ပြစ်တင် ဝေဖန်မှုတွေ အရှိန်မြင့်ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့အချိန်မှာဘဲ ထိပ်ပိုင်း တာဝန်ရှိသူတွေအကြား ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ဖိအားပေး ပြောဆိုမှုတွေ ထွက်လာအပြီးမှာ အခုလို ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲ ရာထူးက နုတ်ထွက်မယ့်သတင်း ထွက်ပေါ်လာတာပါ။
ဇန်န၀ါရီလ ၆ ရက်နေ့က သမ္မတရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က Joe Biden ကို ရွေးကောက်ခံသမ္မတအဖြစ် အတည်ပြုရေး ပြည်နယ်ကိုယ်စားပြုမဲတေကို အထက်နဲ့ အောက်လွှတ်တော်တို့မှာ ရေတွက်နေကြစဉ် သမ္မတ Donald Trump ကို ထောက်ခံသူတွေက လွှတ်တော်အအောက်အဦးကို အကြမ်းဖက် ၀င်ရောက် စီးနင်းခဲ့ကြတာကြောင့် အတည်ပြုရေးအစီအစဉ် ခေတ္တ ဆိုင်းငံခဲ့ရပါတယ်။ လွှတ်တော်အဆောက်အဦးကို အခုလို ဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးက အဓမ္မ ၀င်ရောက်စီးနင်းတာ ခေတ်သစ် အမေရိကန်သမိုင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဝါရှငျတနျမွို့တျော လှတျတျော နဲ့ အစိုးရရုံးမြား လုံခွုံရေး ရဲတပျဖှဲ့အကွီးအကဲ ရာထူးမှ နုတျထှကျမညျ
အမရေိကနျပွညျထောငျစု၊ ဝါရှငျတနျ ဒီစီမွို့တျောမှာရှိတဲ့ လှတျတျောအဆောကျအဦးတှနေဲ့ ကှနျဂရကျလှတျတျော စာကွညျ့တိုကျ အပါအဝငျ နိုငျငံတဝှမျးမှာရှိတဲ့ လှတျတျောဆိုငျရာ အဆောကျအဦးတှရေဲ့ လုံခွုံရေးကို တာဝနျယူရတဲ့ (United States Capitol Police) ရဲတပျဖှဲ့အကွီးအကဲ Steven A. Sound ဟာ ဇနျနဝါရီလ ၁၆ ရကျနမှေ့ာ ရာထူးကနေ နှုတျထှကျမယျ့အကွောငျး အမရေိကနျ သတငျးမီဒီယာတှမှော ကွာသပတေးနကေ့ ဖျောပွထားပါတယျ။
ဇနျနဝါရီလ ၆ ရကျ၊ ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ လှတျတျောအဆောကျအဦးကို သမ်မတ Donald Trump ကို ထောကျခံသူတှကေ ဝငျရောကျ စီးနငျးခဲ့ကွတဲ့ဖွဈစဉျနဲ့ ပတျသကျလို့ လှတျတျောအတှကျ လုံခွုံရေးတာဝနျယူရတဲ့ ရဲတပျဖှဲ့အပျေါ အပွဈတငျ ပွောဆိုမှုတှေ ထှကျပျေါလာပွီး မကွာခငျမှာဘဲ သူ့အနနေဲ့ ရာထူးက မကွာခငျမှာ နုတျထှကျမယျဆိုတဲ့ သတငျးတှေ ထှကျပျေါလာတာပါ။
ရှေးကောကျခံသမ်မတ Joe Biden ကမျြးသစ်စာကြိနျဆိုဖို့ ရကျအနညျးငယျအလိုမှာ လှတျတျော အဆောကျအဦးတှနေဲ့ အစိုးရရုံးတှရေဲ့လုံခွုံရေး တာဝနျယူရတဲ့ ရဲတပျဖှဲ့အကွီး ရာထူးက နုတျထှကျမှာဖွဈကွောငျး ရဲတပျဖှဲ့ပွောခှငျ့ရက ကွာသပတေးနမှေ့ာ ပွောပါတယျ။ ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ ဖွဈသှားခဲ့တဲ့ဖွဈစဉျနဲ့ပတျသကျလို့ လှတျတျောလုံခွုံရေးတာဝနျယူထားတဲ့ ရဲတပျဖှဲ့ရဲ့ လုံခွုံရေးအားနညျးခကျြတှအေပျေါ နိုငျငံတဝှမျး ပွဈတငျ ဝဖေနျမှုတှေ အရှိနျမွငျ့ဖွဈပျေါလာနတေဲ့အခြိနျမှာဘဲ ထိပျပိုငျး တာဝနျရှိသူတှအေကွား ပွောငျးလဲမှုတှေ လုပျဆောငျဖို့ လိုအပျကွောငျး ဖိအားပေး ပွောဆိုမှုတှေ ထှကျလာအပွီးမှာ အခုလို ရဲတပျဖှဲ့အကွီးအကဲ ရာထူးက နုတျထှကျမယျ့သတငျး ထှကျပျေါလာတာပါ။
ဇနျနဝါရီလ ၆ ရကျနကေ့ သမ်မတရှေးခယျြရေးအဖှဲ့က Joe Biden ကို ရှေးကောကျခံသမ်မတအဖွဈ အတညျပွုရေး ပွညျနယျကိုယျစားပွုမဲတကေို အထကျနဲ့ အောကျလှတျတျောတို့မှာ ရတှေကျနကွေစဉျ သမ်မတ Donald Trump ကို ထောကျခံသူတှကေ လှတျတျောအအောကျအဦးကို အကွမျးဖကျ ဝငျရောကျ စီးနငျးခဲ့ကွတာကွောငျ့ အတညျပွုရေးအစီအစဉျ ခတ်ေတ ဆိုငျးငံခဲ့ရပါတယျ။ လှတျတျောအဆောကျအဦးကို အခုလို ဆန်ဒပွလူအုပျကွီးက အဓမ်မ ဝငျရောကျစီးနငျးတာ ခတျေသဈ အမရေိကနျသမိုငျးမှာ ပထမဆုံးအကွိမျလညျး ဖွဈပါတယျ။
ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မှု ကန်ခေါင်းဆောင်တွေ ပြစ်တင်ရှုတ်ချ
ကန် ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မြင်ကွင်း မျက်မြင်တွေ့သူတွေရဲ့ ပြောဆိုချက်
အာဏာလွှဲပြောင်းရေး ချောမွေ့စေပါမယ်လို့ သမ္မတထရမ့်ပ် အာမခံ
ကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ Joe Biden အနိုင်ရသူအဖြစ် ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် အတည်ပြု ကြေညာ
ဆန္ဒပြသူတွေကြောင့် ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ သမ္မတရွေးချယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်မဲ ရေတွက်မှု ကန်လွှတ်တော် ပြန်စ
ကာဖျူးစတင်ပြီး Trump ထောက်ခံဆန္ဒပြမှုအခြေအနေ